Saamaynta Digg: Gunaanad ... Ma Caawisaa? | Martech Zone
Sabti, Agoosto 5, 2006 Khamiis, Janaayo 5, 2017 Douglas Karr
Markii aan soo dhigay muuqaal qosol badan oo ku saabsan Bill Gates iyo Napoleon Dynamite, Ujeeddadaydu waxay ahayd inaan arko saameynta uu Digg ku yeelan karo u bandhigidda boggeyga kuwa kale. Sidoo kale, ujeedkeygu wuxuu ahaa inaan muujiyo saameynta ka dib "Digg Effect". Nuux on Okdork ayaa iga sii daacad ah tan.
"The Digg Effect" waa katarabtii ku dhacay hits ay goobtaada heshay markii aad sheeko ku gudbiso Digg in "Diggers" kale ay ka helaan. Su'aasha ugu dambeysa waxay tahay ma sameyn laheyd qof aniga ila mid ah wax wanaag ah? (Haddii aad jeclaan lahayd inaad aqriso Qaybta I ee imtixaankan, dhagsii halkan).
Tirakoobka (Saamaynta Digg waa soo kabashada weyn):
Waxaa laga yaabaa inaan tan ka warbixiyo maalin hore… waxaad ogaan doontaa qodobka ugu dambeeya ee jaantuska inuu aad u hooseeyo. Taasi waa sababta oo ah tirakoobyada si buuxda looma soo sheegin shalay.
Toddobaad ka dib markii aan wax weyn ku dhuftay, weli waxaan ka helayaa xoogaa xeelado taraafiko ah Digg. Si kastaba ha noqotee, tirada booqashooyinka badan iyo booqashooyinka markii ugu horreysay waxay ka socdaan 6.38% ilaa 11.77%. Taasi waxay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah "qodayaashaydii" ay "qodeen" goobtayda. Sidoo kale, tirada dadka loo qoro quudintaydu way saddex jibaarantay oo maalin walba wax bay akhriyaan (stats by FeedPress). Guud ahaan, tirada booqdayaasha boggeyga maalin kasta waa 300%. Way adag tahay in lagu arko garaafyada illaa iyo inta cabbirka kor u kacay si loo daboolo dhacdadii Digg… laakiin isbeddelka dhacdada ka dib waa yara xoogaa.
Tani ma wax fiicanbaa? Malaha! Marka laga hadlayo 4,000 ee dadka waawayn ee anfacaya ee u yimid goobtayda intii lagu jiray dhacdadii Digg, waxaan u maleynayaa inaan ku daray 100 kale ama akhristayaal boggeyga maalin kasta. Ha igu qaldan, tani waa heer aad u xun oo haynta ah. Qayb ahaan, maxaa yeelay qayb yar oo ka mid ah daawadayaasha fiidiyowga ayaa runtii laga yaabaa inay xiiseynayaan balooggeyga. Waxay u egtahay inaad ku xayaysiineyso Studio-gaaga Yoga joornaalka. Xaqiiqdii, milyan milyan ayaa fiirinaya xayeysiiska… laakiin dhammaantood dhammaantood dan kama lihi.
Miyaan markale sameyn lahaa?
Suurtagal Waxaan u maleynayaa inaan iska ilaalin lahaa fiidiyowyada runtii aan khuseyn akhristayaashayda / macaamiishayda. Haddii aan haysto fiidiyoow ah wax la xiriira Suuqgeynta, otomaatiga, ama Indianapolis probably Waxaan u maleynayaa inaan fursad u helo inaan mar kale aaso boggeyga. Wixii ka baxsan taas, in kastoo, runtii kama walaacsanahay inaan u bandhigo qoraalkayga dadyowga aan hoot siinin.
Tags: saamaynta kala duwanaantaqod
Aug 5, 2006 at 1: 11 AM
dabagal weyn. waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay ku xirnaanta. waan ku faraxsanahay qaar sida aniga oo kale ah ayaa igu dhegay oo waxaan ku raaxeystaa akhrinta qoraaladaada.
Apr 11, 2007 at 10: 49 PM
Waan ogahay inay tani tahay qoraal duug ah. Waan ku raacsanahay kor u kaca bogagga aragtiyada iyo booqdayaasha gaarka ah ee goobta ka dib markaad qoddo boostada. Laakiin waxa ku saabsan tayada? Soo booqdayaashan ma soo laabtaan gabi ahaanba? Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la arko heerka beddelka.
Apr 12, 2007 at 6: 36 AM
Shakhsiyan, uma maleynayo inay tayadu halkaas jirto. Waa mid ka mid ah cilladaha aan ku qabo Digg, qeybahoodu waa kuwo mugdi ku jiro oo mawduuca aan dhab ahaan loo bartilmaameedsaneyn dhagaystayaasha. Qaar ka mid ah bogagga kale ee calaamadeynta bulshada waxay si fiican uga shaqeeyaan bar-tilmaameedka niche laga yaabo inay ku dhegan yihiin, laakiin ma ahan Digg.
Heerka beddelka ee kor ku xusan wuxuu ka yaraa 0.25%. Digggu wuxuu sii waday inuu keeno akhristayaasha kabacdi bilowga, markaa waa sababta aan u qiyaasayo 'wax kayar'.